Hakiimni loogii sanyummaan yaala dhabuu komataa turte Covid19n duute – Kichuu
HomeNewsAfricaHakiimni loogii sanyummaan yaala dhabuu komataa turte Covid19n duute
Hakiimni loogii sanyummaan yaala dhabuu komataa turte Covid19n duute.
Doktorri gurrattiin lammii Ameerikaa ganna 52 Indiyaanaapooliisitti Covid-19n duute wayita dhukkubsattee hospitaala sireerra turtetti sababa bifa isheetiin yaala gahaa dhorkamuu himachaa turte.
Viidiyoo wayita dhukkubsattee sireerra turte gadi dhiisteen, yaala argachuuf ‘kadhaachaan ture’ jette.
Du’a isheen gaddi itti dhagaahamuu kan ibse hospitaalli Indiyaanaa Noorzi – loogiif araarama akka hin qabne hime dhimma dhukkubsattootaa irratti tokko tokkoon yaada hin kennu jedhe.
Akka qorannoowwan agarsiisanitti namooti gurraachi caalaatti Covid-19f saaxilamoodha.
Dr Moor dilbata darbe hospitaala keessatti duute.
Mudde 4 dhukkubni ishee akkamiin doktora hospitaalichaan adii ta’een salphifamee akka ilaalame Facebook irratti maxxansitee turte. Yeroos hafuura baafachuu rakkattee boo’aa akka turte himte.
“Somba koo hin ilaalle, sirumayyuu na hin tuqne. Qorannoo qaamaa kamiyyuu naaf hin goone,” jettee barreessite.
Hospitaalichi himata loogii sanyummaa kamiyyuu akka qoratu himee – akka dhaabbata hunda qixa tajaajiluuf hundaa’eetti loogiif araarama hin qabu jedhe.
Dr Moor haadha mucaa dhiiraa ganna 19ti. Haatii fi Abbaan ishee dhukkuba waa dagachuu ykn ‘dementia’n rakkatu.
Baasii awwaalcha isheef jecha gama GoFundMe doolaarri 102,000 walitti qabameera.
‘Warri gurraachi akkanaan ajjeefamu’ Dr Moor vaayirasicha qabaachuun ishee kan beekame Sadaasa 29 ture. Sana booda gubaa qaamaa fi qufaa jabaa qabdi turte. Booda harganuufis rakkachuu kan barreesite hakiimni kun ofii doktora taatee osoo jirtuu yaala gahaa argachuuf rakkachuu himte.
Qorichi farra vaayirasii ‘Remdesivir’ argachuuf akkasumas lapheen ishii iskaan akka ta’u kadhachaa turte.
Kana giduutti doktorri tokko qoricha argachuuf ulaagaa akka hin guunne fi gara mana ishee akka deemtu itti hime. “Akkan nama araada qorichaa qabu wayi ta’e natti dhagaahame,” jetti viidiyoo osoo hin du’iin dura waraabdee Facebook irratti gadi dhiifteen. “Akkan hakiima ta’e ni beeka ture. Ani qoricha nama hadoochu hin fudhadhu,” jetti.
Dr Moor hospitaala biraatti akka dabarfamtu gaafattullee, hospitaalaa akka baatu taasifamte. Haa ta’u malee dhiibbaan dhiigaa ishee baay’ee gadi buunaan deebite. “Warri gurraachi akkanaan ajjeefamu” jette Dr moor. “Gara manaa galaa yoo jettuun galanii maal gochuu akka qaban hin beekan.”
“Osoon silaa nama adii ta’ee wanti kun hundi narra hin gahu ture” jetti.
Wanti Dr Moor mudate Ameerikaa keessatti dheekkamsa uume. Sirni fayyaa biyyattii gurrachota irratti loogii qaba jedhu namootni hedduun. Ameerikaa keessatti vaayirasichi warra kaan caalaa gurraachota akka malee miidhe. Nama adii waliin yoo madaalamu gurrachonni carraan vaayirasichaan du’uu dachaa sadi.
BBC afaan Oromoo gabaase